Gaggeessaan Amantii Waaqeffannaa qabamanii hidhaman – Ayyaantuu
HomeGaggeessaan Amantii Waaqeffannaa qabamanii hidhaman
Keelloo: Fulbaana 22,2021
Gaggeessaa Amantii Waaqeffannaa kan ta’an obbo Darajjee Raggaasaa kan jedhaman giddu gala Oromiyaa aanaa Boosat keessaa qabamanii hidhamuu Keelloon odeeffate.
Akka gabaasa arganneeffi obbo Darajjee Raggaasaa Fulbaana 15,2021 walga’ii Idilee dhaabbata hordoftoota amantii Waaqeffannaa ji’aa kan baatii Hagattaa irraa hirmaachaa oolanii gara mana isaanii wayiita galuuf jedhanitti qabamanii hidhaman jedhame.
Gaggeessaa Amantii Waaqeffannaa kan ta’an Obbo Darajjee waraanni mootummaa qabee hidhuu kan himu gabaasni arganne, amma mana hidhaa waajjira foolisii Olaancitii keessatti dararaa argaa jiraachuu isaanii eerame.
Gahee hojii isaanii kan galma Waaqeffannaa keessaas kan eeru gabaasni arganne, obbo Darajjeen barsiisaa amantichaa ta’uu fi akkasumas miseensa mana maree dhaabbata amantii Waaqeffannaati. Akkasuman barreessaa kutaa of danda’uu dhaabbatichaa fi hojjetaa baankii ta’uu isaanii mirkaneeffannee jirra.
Erga nama kana qabanii hidhaniis waraanni mootummaa mana jireenyaa isaanii kan magaalaa Adaamaa sakattaa’anii, mana murtiittis dhiyaachuun beellamni guyyaa borii Fulbaana 23,2021 tti akka irratti qabamee jiru gabaafame.
Namni kun maaliif akka qabamee hidhame ifatti himamuu baatus waraanni mootummaa yeroo adda addaatti ilmaan Oromoo hidhuu isaa uummatni nii himata.
Amantii fi Aadaa Oromoo: "Amantii kan biyya lafaaf tolchee kenne warra Kuushi"
Amantii fi Aadaa Oromoo: "Amantii kan biyya lafaaf tolchee kenne warra Kuushi" (BBC Afaan Oromoo)…
KMN: Pirezadaantii Waldaa Maccaa fi Tuulamaa dabalatee namoonni mana HD ABO bulan muraasni hidhaman. KMN…
Miseensota fi Deegagrtoota ABO Hidhaman #Updated: Miseensota fi Deegagrtoota ABO Hidhaman ==== BECAUSE THEY ARE…